Qardho:-Gabadh Soomaaliyeed Oo Aad Uga Murugootay Bissad Ka Bakhtiday
Monday February 11, 2019 - 06:12:39 in Wararka by Abdi A.
Qardho-(Caalami-News)- Gabadh ku nool magaalada Qardho oo lagu magacaabo Ruun Cali Cabdi ayaa waxa ay lahayd bisad ay aad u jeceshahay. Bisadii ayaa ka jabtay ka dib markii ay dhagax kaga dhufteen carruur yaryar.
Waxa ay xidhiidh la samaysan wasaaradda xanaannada xoolaha ee magaaladeeda balse kama aanay helin wax caawin ah.
Sheekada Ruun iyo bisadeeda ayaa hadal hayn ka dhalisay baraha ay ku wada xiriiraan bulshada Soomaaliyeed, waxaana dadka qaar ay ku tilmaameen "qof waalan oo magac raadis ah."
"Bisadeydu xitaa hilibka caydhiinka ah ma aanay cuni jirin, oo waxaan usoo iibin jiray buskud iyo caano," ayay tidhi Ruun.
Ruun ayaa BBC-da laanta af Soomaaliga u sheegtay in hadda ka hor ay ka xanuunsatay bisadda, ka dibna ay la xiriirtay dhakhtar xayawaanka qaabilsan oo ku nool Masar, kaasoo kula taliyay dawada ku haboon bisadda.
Waxa ay intaa ku dartay in ay rajeynayso in mustaqbalka ay furto goob ay ku xananaaneyso bisadaha, ayna diyaar u tahay inay raadsato bisad kale maadaama ay ka dhimatay tii ay jeclayd.
Gabadha ayaa aad u jeclayd bisadd